I-Fire HD 10, ithebhulethi ye-Amazon ivuselelwa ngamandla amakhulu futhi iyakhazimula | Izindaba zamagajethi
I-Fire HD 10, ithebhulethi ye-Amazon ivuselelwa ngamandla amakhulu futhi iyakhazimula
UMiguel Hernandez | 26/05/2021 10:00 | General, Izibuyekezo
Amazon iyaqhubeka nokubheja ngentando yeningi imikhakha eminingi ngemikhiqizo yayo eyisisekelo, yile ndlela inkampani kaJeff Bezos ebethula ngayo imikhiqizo eminingana evame ukuphumelela ngenxa yenani layo elikhulu lemali. Phakathi kwalezi sinezipikha, ama-e-book kanye nama-tablet.
Hlala nathi futhi uthole ukuthi kungani la mathebhulethi e-Amazon angabizi kakhulu evame ukuthengiswa kakhulu nokuthi ayini amakhono abo obuchwepheshe, ingabe unesifiso sokuwathenga?
Cishe cishe njalo, sinqume ukuhambisana nokuhlaziywa kwethu okujulile ngevidiyo evuliwe isiteshi sethu se-YouTube, Kule vidiyo uzokwazi ukubona i-unboxing ephelele ukubheka okuqukethwe yibhokisi lale-Amazo Fire HD 10. Impela, futhi senza izivivinyo kwi-hardware, kuzici ezinemininingwane eminingi ngisho nakuyo screen nezipikha zayo, ngalokho ividiyo engaba ukuhambisana okuhle nokufundwa kwalokhu kuhlaziywa. Ungaphuthelwa futhi usishiyele imibuzo ebhokisini lokuphawula.
2 Izici zobuchwepheshe nokuxhuma
3 Uhlelo lokusebenza nesipiliyoni somsebenzisi
4 Isipiliyoni seMultimedia
Kulesi senzakalo, i-Amazon inqume ukungasunguli nhlobo, inkampani iJeff Bezos ihlale ibheja ngomklamo owenziwe ngokweqile nezinto ezibonakalayo, yize zingeke zisidonsele amehlo ngenxa yobumnandi bazo, zizokwenza lokho ngenxa yokumelana kwazo okuhle kakhulu ukushaya nokuklwebheka. Kuye kwenzeka okufanayo ngale Fire HD 10 evela e-Amazon ephakela kuwo wonke amadivayisi afanayo enkampani ngakho-ke isishiya ingaphandle eliyindilinga elincane lihambisana nokusetshenziswa isikhathi eside, I-matte emnyama ne-polycarbonate emangele kancane futhi ilogo yokumamatheka kuphela ngemuva kwalesi sibhebhe esikhulu ngenxa yobukhulu bayo.
I-Amazon Fire HD 10 yehle kancane isuka kunguqulo yayo yangaphambilini iye ku- 465 amagremu
Ubukhulu: X x 247 166 9,2 mm
Ekhoneni eliphezulu sinekhamera engemuva, ngendlela efanayo nokuthi engxenyeni engenhla kukhona konke ukuxhumana nezinkinobho, imbobo ye-USB-C, imbobo ye-3,5 mm Jack, izinkinobho ezimbili zevolumu nenkinobho yamandla. Ngokwengxenye yayo, iphaneli yesikrini, engavukuzwa, inomklamo oyisicaba osiza ukubekwa kwabavikeli. Sinekhamera yezingcingo zevidiyo ezitholakala ohlangothini lwesobunxele uma siyisebenzisa zibheka phezulu nasengxenyeni engenhla emaphakathi uma siyisebenzisa ngokuvundlile, njengoba kubonakala kuhlosiwe.
Izici zobuchwepheshe nokuxhuma
Kulesi sigaba, i-Amazon ayizange idume ngokufaka okwakamuva kwezobuchwepheshe namandla wehardware yalawa madivayisi, kepha ngokuzama ukunikeza ubudlelwane obuqinile phakathi kwekhwalithi nentengo. Kulokhu bafake iprosesa ama-cores ayisishiyagalombili ku-2,0 GHz umkhiqizi wakhe esingamazi, yize konke kukhombisa ukuthi yiMediaTek ngokuya ngokuhlaziya kwethu. I-RAM ikhula ize ifike ku-3 GB isiyonke ngenkathi ibheja kwisitoreji esingu-32 GB noma esingu-64 GB ngokuya ngemodeli ekhethiwe.
Ukuxhuma sinayo I-Dual band WiFi 5, okukhombisile ekuhlaziyweni kwethu ukusebenza okuhle ngazo zombili amanethiwekhi we-2,4 GHz ne-5 GHz. I-Bluetooth 5.0 LE qUzoba nesibopho sokudluliselwa komsindo kwamahedfoni angenantambo noma izipikha, konke ngaphandle kokukhohlwa itheku 3,5 mm umgodi ukuthi le Fire HD 10 ifaka engxenyeni yayo ephezulu.
Ngokuqondene namakhamera, 2 MP yekhamera engaphambili ne-5 MP yekhamera yangemuva ezosisiza ukuphuma ezinkingeni, ukuskena amadokhumenti kanye ... nokunye okunye.
Uhlelo lokusebenza nesipiliyoni somsebenzisi
Njengoba wazi kahle, imikhiqizo yoMlilo yakwa-Amazon, noma ngabe ingamathebulethi noma amadivayisi we-smart TV, inenguqulo eyenziwe ngokwezifiso ye-Android egxile kubasebenzisi be-Amazon. Sine-Fire OS, ungqimba lwe-Android olungenayo i-Google Play Isitolo, Noma kunjalo, singafaka ama-APK kunoma yimuphi umthombo wangaphandle esibona kufanelekile, ngoba uzofanelana ngokuphelele. Ngokwengxenye yayo, i-Operating System ayinayo i-bloatware ngale kwezinhlelo zokusebenza ezihlanganisiwe ze-Amazon kanye nokwenza ngcono kwayo i-hardware kube nomthelela esikhathini sokuzulazula ngokwengeziwe.
Ngokwengxenye yaso, sinesiphequluli esingathuthukiswa, ongasishintsha ngokushesha nge-Chrome uma ufisa. Ngaphezu kwalokho, esitolo sohlelo lokusebenza le-Amazon singafinyelela kuzinguqulo zeNetflix, iDisney + nabo bonke abanye ababalingisi bokusakaza abahlinzeki bokuqukethwe okubukwayo. Kodwa-ke, ngiyaphikelela ukuthi ukufaka ama-APK kusuka kwimithombo yangaphandle cishe kuyisibopho, okungenasithiyo.
Ngakolunye uhlangothi, ithebhulethi esetshenziswayo igxile kokuqukethwe okudla kakhulu, funda, phequlula noma ubuke amavidiyo. Uma kukhulunywa ngokudlala imidlalo yevidiyo, siqala ukuthola ezinye izinkinga zokusebenza, njengoba kungalindelwa kule Hardware eshiwo ngenhla.
Njengoba sishilo ngaphambili, sigxila eqinisweni lokuthi sizosebenzisa okuqukethwe, ngakho-ke kubalulekile ukuhlaziya ukusebenza okuqhuba le misebenzi ye-Amazon Fire HD 10. Kulokhu, inkampani ithi inyuse ukukhanya kwesikrini ngo-10% ngokuqhathaniswa nenguqulo yangaphambilini, into eqaphela ngokwethembeka, ikwenze kube mnandi kakhulu ukusebenzisa ngaphandle. Kodwa-ke, akusikho ukuthi sinokukhanya okuphawuleka ngokukhethekile, okungeze ekusweleni kwento elwa nokubonisa kusho ukuthi singaba nobunzima elangeni eligcwele, into engeke ijwayeleke.
Tamaño Isikrini: 10,1 intshi
Isinqumo: Amaphikseli angama-1.920 x 1.200 (224 dpi)
Ngokuqondene nomsindo, sineqoqo lezipikha ezibekwe kahle ezizonikeza ukuhambisana nazo Dolby Atmos ngaphezu kwesitiriyo sakudala. Basebenza ngaphezu kokufanele futhi banikeza umsindo ozwakala ngokwanele ukujabulela amavidiyo, ama-movie nomculo.
Ngokuphathelene nokuzimela, ngaphandle komthamo ku-mah singakutshela ukuthi sinezinsuku ezimbili noma ezintathu zokusebenzisa kalula, ngaleyo ndlela sihambisana imbobo yayo ye-USB-C kanye neshaja ye-9W efakiwe i-Amazon enomusa ngokwanele ukuthi ingafaka ebhokisini. Ngokuphelele, cishe amahora angu-12 wesikhathi sesikrini.
Sithola ithebhulethi engu-10,1-intshi, ihadiwe elinganiselwe kanye nentengo yayo kanye nokunikezwa okuthokozisayo okuhlose ikakhulukazi ekudleni okuqukethwe, kungaba kuzingxenyekazi ezinikezwa yi-Amazon uqobo noma kubahlinzeki bangaphandle. Intengo yayo izobe izungeze ama-euro angama-164,99 ngenguqulo engu-32 GB kanye nama-euro angama-204,99 ngenguqulo engu-64 GB. Yize kuyiqiniso ukuthi ezinhlinzweni ezithile singathola amaphilisi angcono aqediwe ngentengo efanayo evela kumafemu afana noChuwi noma iHuawei, isiqinisekiso nokwaneliseka okunikezwa yi-Amazon kungadlala impahla ebalulekile kulolu daba. Itholakala kusuka ngoMeyi 26 kuwebhusayithi ye-Amazon.
I-HD HD 10
Kuthunyelwe ku: May 26 we-2021
Ukulungiswa kokugcina: May 23 we-2021
Idizayini nezinto zokwakha okucatshangwe ukuthi zingamelana nazo
Isistimu esebenzayo ngaphandle kwe-bloatware
1GB enye i-RAM ayitholakali
Intengo izoheha ikakhulukazi ekunikezweni
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Fire HD 10, ithebhulethi ye-Amazon ivuselelwa ngamandla amakhulu futhi iyakhazimula
I-Reolink Argus 3, ikhamera ephelele yokuqapha
Shure MV5C, ukuhlaziywa okujulile kwemakrofoni eguquguqukayo